Aiza i Zeenat Shahzadi? Ahiana Ho Niharan’ny Fanjavonana An-terisetra Ao Pakistàna Ilay Mpanao Gazety · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Mey 2016 20:11 GMT
Mijery ny sarin'i Zeenat Shahzadi, zanany vavy tsy hita, i Kaneez Bibi. Sary an'ny mpanao gazetin'ny BBC Saba Eitizaz, izay namaky bantsilana voalohany illay tantara.
Sivy volana izay no lasa hatramin'ny nahitàna farany an'i Zeenat Shahzadi, mpanao gazety tsy miankina, nalain'ireo Pakistaney mpiasan'ny fiarovana an-keriny teo amin'ny araben'i Lahore, raha ny filazan'ny fianakaviany. Tamin'io fotoana io, teo am-piasàna mikasika ny tranga nahazo an'i Hamid Ansari, lehilahy Indiana iray tsy hita popoka tao Pakistana tamin'ny volana Novambra 2012, i Shahzadi. Nanampy nametraka fanangonan-tsonia iray momba ny olona nanjavona sy nandresy lahatra ny komitin'ny governemanta misahana ireo fanjavonana an-terisetra mba hanadihady izany ny tenany.
Tokony ho nitondra fijoroana vavolombelona mikasika ilay tranga i Shahzadi herinandro vitsivitsy taorian'ny nanjavonany. Taty aoriana, niaiky ny tafi-pirenena fa any amin'ny fonjany i Ansari ary nanameloka azy ho mpitsikilo tamin'ny fitsarana miaramila.
Efa ela no niatrika fiampangana ho miazona olon-tsotra eo ambanin'ny ady amin'ny fampihorohoroana ireo masoivohon'ny fiarovana ao Pakistana, vao haingana izay dia teo ambanin'ny Didim-panjakana Fiarovana an'i Pakistana, (PPO) tamin'ny 2013. Ny PPO, izay nambaran'ny Fikambanan'ireo Mpitsara (ICJ) fa “lalàna jadona indrindra enti-manohitra ny asa fampihorohoroana”, dia manome alàlana ny governemanta mba tsy hanome vaovao mikasika ny misy ireo voafonja, na koa ny toerana sy ny antony namonjana azy ireo, ho an'ny “antony mitombona” rehetra.
Amin'ireo tranga marobe, nivadika ho fahafatesana ny fanjavonana. Araka ny voalazan'ny Human Rights Watch, teo anelanelan'ny taona 2009 sy 2015 dia vata-mangatsiakan'olona miisa 4.557 nahiana ho niharan'ny fanjavonana an-terisetra no hitan'ireo tompon'andraikitra.
Lehilahy na zazalahy avokoa no voakasiky ny ankamaroan'ireo tranga ireo, ary i Shahzadi no heverina fa vehivavy mpanao gazety nanjavona voalohany indrindra. Mampitroatra ny fitarainam-bahoaka hikaroka ny rariny ho an'ny fianakaviany sy ho an'ireo niharam-boina hafa vokatry ny fanjavonana an-terisetra ny tantarany. Nanavao ny fahalinana mikasika ilay tranga ny lahatsoratr'i Saba Eitizaz tao amin'ny BBC vao haingana, izay nanaraka akaiky ny zava-niseho. Nitombo hatrany ny hirifirin'ny fianakaviany hatramin'ny nanjavonan'i Shahzadi – namono tena ny anadahiny, Saddam Hussain, 17 taona, tamin'ny volana Martsa.
Nanontany i Saqlain Imam, mpitati-baovao miaraka amin'ny BBC, tao amin'ny Twitter, raha toa ka hanampy amin'ny fitadiavana ny toerana misy an'i Shahzadi ny Jeneraly Lehiben'ny Tafika, Raheel Sharif:
Misy azon'i Jeneraly Raheel Sharif atao ve mikasika ny fiverenany?
Zeenat: Tahotra ny amin'ilay Pakistaney mpitati-baovao tsy hita popoka
— Saqlain Imam (@imam1) 11 May 2016
Nitsikera ny mpanao gazety iray hafa sady mpanoratra ao amin'ny Global Voices, Veengas:
— Veengas (@VeengasJ) May 11, 2016 zzzz
Vaovao mampalahelo – tsy azo ekena. Mifohaza ry media “#ZeenatShahzadi: Tahotra ny amin'ilay Pakistaney mpitati-baovao tsy hita popoka https://t.co/V4JpC9UO6I avy amin'ny @bbcworldnwes”
— Veengas (@VeengasJ) 11 May 2016
Niresaka momba ny andraikitry ny Fitsarana Avo manoloana io olana io ny mpanao gazety tranainy Matiullah Jan, izay mitatitra betsaka mikasika “ireo fanjavonana an-terisetra”:
Tsy nahomby mihitsy ny Fitsarana Avo sy ny Komisiôna Miandraikitra ny Olona Nanjavona tamin'ireo tranga maro momba ny fanjavonan'olona, isan'izany i #ZeenatShahzadi izay mpanao gazety
— Matiullah Jan (@Matiullahjan919) 11 May 2016
Nizara ny ahiahiny i Wasay Jalil avy amin'ny antoko politika Mutahhida Qaumi Movement (MQM):
Nahoana no tsy maintsy mandoa ny sarany ianao ao Pakistana rehefa mampiaka-peo manoloana ny tsy rariny?? #ZeenatShahzadi #AfahoZeenat
— Wasay Jalil (@WasayJalil) 11 May 2016
Nirary soa ho an'ny fianakavian'i Shahzadi ireo mpampiasa aterineto, indrindra ny reniny, ary nanantena fa ho tsara fiafara ny tantara.
Antenaiko fa tsy maty fo aman'aina i Shahzadi na aiza na aiza no misy azy. Nitatitra mikasika ny fanjavonan'olona izy ary ny tenany mihitsy no nanjavona ny farany.
— S. A. Shah (@AtharShahJee) 11 May 2016
Tanatinà pejy Facebook antsoina hoe Lahateny Mifototra amin'ny Zava-misy, nizara ireo fijeriny mikasika ny tsimatimanota fanaon'ireo miaramila matetika i Junaid Malik:
Indiana i Hamid Ansari ary Pakistaney kosa i Zeenat. Tsy nanao heloka bevava i Hamid, sa tsy izany? Ary ity zazavavy, Zeenat, ity kosa, dia niasa fotsiny nikaroka ny nahazo azy. Tovovavy tsotra fotsiny i Zeenat.
Tsy azo antoka izay misy azy ireo sy izay zavatra iainany amin'izao. Niara-nanjavona fotsiny tsotra izao ry zareo.
Tsy misy na iray aza manan-kery hanao na inona na inona. Mankafy ny tsimatimanota manokana ataony eto amin'ity firenena ity ny miaramila ary tsy misy manam-pahefana afaka manao fanamby amin'ireo masoivoho.
Moa ve ny fiainan'olombelona sy ny fiain'olompirenena tsotra, tsy misy vidiny sy zava-poana ao Pakistana? Mba misy Zon'olombelona arahina ve ao Pakistana?
Tao amin'io tari-dresaka io ihany, niresaka momba ny tahony mikasika ireo fanjavonana an-terisetra i Nazzia Shafiq Momina:
Tonga amin'ny fotoana izay mety hanjavonan'ny tsirairay amintsika noho ny fikarohana na ny filazàna ny marina ny toe-draharaha misy, nefa avy eo hotohizan-dry zareo ny fisamborana kisendrasendra ireo mahery fo amin'ny anaran'ny fanjavonako na ny famonoana ahy. Ary ny vahoaka hitehaka klap klap klap Rangers kei aaney sei kitna sukoon hei [oao oao oao milamina ny tanàna hatramin'ny nandraisan'ny hery ivelan'ny tafika ny fahefana]. Hagaigena avokoa
Efa ho herintaona izao, nefa mbola mijanona ho zava-miafina ny toerana misy an'i Shahzadi. Mino mafy ireo mahery fo mpiaro ny zon'olombelona sy ny fianakaviany fa mitana anjara toerana eo amin'ny fanjavonany ny masoivohon'ny fiarovana. Na izany aza, sahala amin'ireo tranga an-jatony talohan'ny azy, tsy misy ahafantarana mazava izay tompon'andraikitra sy ny mety ahafantaran'ny fianakaviany raha mbola velona any izy. Hatreto, na dia maniry mafy ny hiafaràn'izany aza ny reniny Kaneez Bibi, tsy misy azo horaisina.